Uhambo oludlula kuzo zombini iziphelo ze 'Unfriended: Dark Web' - Iimuvi
Uhambo oludlula kuzo zombini iziphelo ze 'Unfriended: Dark Web'
Impelaveki ezayo kwindawo yemiboniso bhanyabhanya ibonakale ifana nayo nayiphi na enye impelaveki eqhelekileyo. UDenzel wayenemovie ephuma , Mamma Mia! yayihamba kwakhona, kwaye bekukho imovie eyoyikisayo ekufuneka ikhutshiwe- Abangenabanini: IWebhu eMnyama , ulandelelwano lwefilimu ka-2014 Akudityaniswanga . Ngokupheleleyo kwinqanaba lekhosi. Kodwa emva koko, ngolwesiHlanu odlulileyo, kwavakala igama ukuba ezi nguqulelo zimbini ze Abangenabanini: IWebhu eMnyama ngeziphelo ezahlukeneyo bezithunyelwa ngaphandle kwiithiyetha ukuba zibonise.
Kwimeko engaqhelekanga yokwenyani yeziganeko, ezingabanjwanga: IWebhu emnyama ayiyi kuba nesiphelo esinye kodwa ezibini ezahlukeneyo kwimidlalo yeqonga. pic.twitter.com/jqaqHmqYAZ
-Bamba umsele (@robtrench) Julayi 13, 2018
Ngaphezu koko, kwakungekho sicwangciso sicacileyo sokuba ezi vidiyo ziya kuboniswa njani. Iya kuba yingxubakaxaka - uya kwindawo yemidlalo yeqonga ungazi ukuba sisiphelo sini na oya kusibona. Kwaye ukuba unethemba lokuzibona zombini iziphelo, kulungile, amathamsanqa-bekungekho ndlela yokuqinisekisa ukuba ubhatalela ukuphela kwe-A okanye i-End B. Kuninzi lwexesha lokubaleka le-movie, yonke into iya kubonakala ifana- ibali malunga nomfana ogama linguMatias (Colin Woodell), abahlobo bakhe abahlanu, kunye nentombi yakhe (uStephanie Nogueras) ababanjwa kumdlalo we-cyber cat-and-mouse obandakanya abahlaseli, iifilimu zesnuff, kunye neengxoxo ezininzi zevidiyo- kodwa emva koko kwisenzo sokugqibela. , ii-plotline ziya kuqala ukuphambuka. Okanye mhlawumbi ngekhe - mhlawumbi ungabona isiphelo esinye kwakhona.
Unoko engqondweni, Umkhombe yathumela ababukeli ababini abakhaliphileyo, u-Austin Elias-de Jesus noKenrick Cai Abangenabanini: IWebhu eMnyama ’S ubusuku bokuvula ngenjongo yokubona iziphelo zomboniso bhanyabhanya. Ihambe kakuhle kakhulu-nangona i-mission inokuba ibonakalisile (kwaye yabanyanzela ukuba bachithe ixesha elininzi kwii-Cinema zeRegal). Apha ngezantsi, u-Elias-de Jesus noCai baveza ezabo iingcinga kunye namava nge IWebhu emnyama.
1. Nceda ucacise ukuGqibezela u-A Abangenabanini: IWebhu eMnyama ngokucokisekileyo kangangoko kunokwenzeka.
UKenrick Cai: Uyazi ukuba njani kwiimovie ezoyikisayo, masihlukane trope ayipheli kakuhle? Abangenabanini: IWebhu eMnyama yenye yeefilimu ezimbalwa apho loo cliché ingangqinelani, kodwa kuphela kuba wonke umntu wayeza kubulawa nokuba kwenzeka ntoni. Ke isigqibo sikaMatias sokushiya indlu yakhe ukuze afumane intombi yakhe-eyahlula ngokuchanekileyo nomhlobo wakhe uDamon-iphela, njengoko sonke besinokuqikelela, kakubi. Ufumana isicelo se-Skype (kubagculi) kwifowuni yakhe, emdibanisa kunye noDamon, kodwa konke oko kunjalo nje ukuba le ligi yabadlali abangama-20 000-kunye nabadlali abonakeleyo banokubona uMatias engqina ngokusweleka kukaDamon ngokuxhoma. Kwaye ungqina u-Erica Dunne ngomngxunya ongathandekiyo. Kwaye ukungqina ukungcungcutheka nokufa kuka-Amaya (asikuboni oko kuba babenemali kuhlahlo-lwabiwo mali lokufa kwabo babini kuphela, ndicinga njalo) kweso sakhiwo simnyama, simnyama. Ngokulula unokuyiphepha imbonakalo bhanyabhanya eyoyikisayo. 2: ungaze ungene kwindawo engaqhelekanga, emnyama ukuba awunyanzelekanga. Amaya, uzenzele le nto. Owu, kananjalo, uMatias uyangqina ngaba badlali babulala ngoyaba ababulali ukuba angahlali. Ewe bavota hayi. Kwaye ke uyasweleka ngokubetha, ngokudika, ngeloli ebonakala ngathi ibaleka ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 leekhilomitha ngeyure ngokukhawuleza. Yiyo yonke into, akunjalo, Austin? Wonke umntu nje, uh, ufile?
UAustin Elias-de Jesus: Ucinga ukuba inqaku elibulalayo lokuzibulala lifakwe kuMicrosoft Word, umsebenzi ongathandekiyo we-Photoshop owenziwa ngabagculeli ukucofa u-Erica Dunne ngokuxhwila uMatias, kwaye inyani u-Amaya ucinga ukuba isoka lakhe lifuna ukudibana kwindawo yokugcina izinto, kodwa ewe, oku yayintle kakhulu into eyenzekileyo. (Nangona kufanele kuqatshelwe ukuba xa uMatias wabethwa yile lori wamiswa nje kwibhayisikile yakhe phakathi esitratweni kwaye ebanda nje apho, nto leyo engazange ibubulumko ukuyenza. Usoloko usengozini enkulu ukubethwa yimoto ukuba uphakathi kwendlela-zizibalo nje ezo.)
Ngapha koko, iifoto zokugqibela zebhanyabhanya zinamanani afihliweyo atyhila ubuso bawo kwaye ancume ngokuhlekisayo, kunye nembono yokudubula ebonisa ukuba yonke imovie yayihamba ngombono womntu oseta i-desktop njengaye ULucius Fox’s ekupheleni kuka UKumnyama Knight . Ke, ngokusisiseko, besikhe sabukela le nto yenziwe ngulo mfo wemigewu kwizikrini zakhe ezahlukeneyo zekhompyuter ngalo lonke ixesha. Yabubusuku obukhulu bomdlalo kubaduni, kwaye i-intanethi kunye netekhnoloji yoyikeka. Kwaye ngokulula ingena lula. Kwaye sonke kufuneka siphose iilaptops kunye neeselfowuni kulwandle.
2. Nceda ucacise ukuphela kwe-B okungafakwanga: IWebhu eMnyama ngokucokisekileyo kangangoko kunokwenzeka.
UEliya-kaYesu: Mna, ngelishwa (okanye ngethamsanqa?), Khange ndibone Ukuphela B; Ndabona ukuphela kuka-A kabini. Oku kusebenze kakuhle kum, njengoko bendisindisiwe kuxinzelelo oluziswa sisiphelo esitsha kwimovie eyoyikisayo. Kwakhona bendisazi ukuba ndizogquma nini amehlo ukuze ndiphoswe kukubona INDODA IXHOMEKILE KWISIKRAYI.
Cai: Kulungile, ke nantsi into eyenzekileyo ngeli xesha: Kwakhona, uMatias uthatha isigqibo sokwahlukana noDamon, okwathi kwakhona, kukhokelela ekufeni kwabo bobabini. Njengokuphela kwe-A, iidrama zingena kwigumbi likaDamon kwaye zimxhome. Kodwa hayi phambi kwamangqina kaDamon u-Erica Dunne wakhwaza emva kokubona ukuba uphethwe kakubi, nangona ndingenakuxela ukuba isikhalo kungenxa yokuba kwakukho umngxunya entlokweni yakhe okanye kuba wabona indlela ekubhakwa ngayo isiqingatha sayo. Ngeli xesha, nangona kunjalo, uMatias akekho ukubukela. Ingxoxo yevidiyo kaDamon kunye noMatias ifikelela esiphelweni ngoMatias efumanisa ingcwaba elisandul 'ukumbiwa kunye nebhokisi engenanto kwindawo apho yena noAmaya baqala khona ukwanga (wamxelela ukuba asebenzise intetho yezandla ukudibana naye apho). Ngequbuliso, enye ye-psychotic yeWebhu yomdlalo weWebhu ibaleka inyuka ivela ngasemva kwaye iyambetha entloko. Emva koko sibona ukufa kukaDamon. Ngeli xesha, u-Amaya ufika engcwabeni, kodwa ngoku kujongeka ngathi yindawo yengca eqhelekileyo kuba aba badlali be-gamer ngandlela thile bakwazile ukufaka uMatias ebhokisini kunye nomngxunya ogqunywe ngexesha elithathayo lokufaka i-microwave ingxowa yepopcorn. Ukufika kuka-Amaya kwaye azame ukuncokola ngevidiyo nesoka lakhe, kwaye ukungcangcazela okubangelwa yifowuni yakhe kwenza ukuba uMatias avuke. Kuphela ngenxa yezizathu ezithile - iqhinga lokuqhekeza, ndicinga ukuba-akakwazi ukufunda imilebe yakhe. Xa ezama ukuthumela iitekisi endaweni yakhe, wonke umyalezo otshintshela kum ndinqwenela ukuba ndingasayina ngcono. Ke, isiphelo kukuba u-Amaya uyasinda, ngelixa uMatias esifa ngeyona ndlela yoyikekayo- ngokumemeza andikwazi ukuphefumla ngelixa ndibanjelwe ebhokisini.
UEliya-kaYesu: Ewe, wow.
I-violet parr umdlali welizwi
3. Kukangaphi kufuneka ubone iWebhu emnyama ukuze ubone zombini iziphelo? Okanye wancama nje?
Cai: Kwafuneka ndiye kwimiboniso emibini kuphela ukuze ndizibone zombini iziphelo!
UEliya-kaYesu: Kulungile, ndoda. Ndincamile emva kokubukela okwesibini. Andazi ukuba ndingaphinda ndibukele le movie kwakhona. Ndiyazi ukuba abantu abaninzi bathi le bhanyabhanya yayilulamile xa ithelekiswa neyona mininzi okanye imiboniso bhanya-bhanya eyoyikisayo, kodwa ndakhe ndanephupha elibi emva kokufunda incwadi yeHardy Boys xa ndandineminyaka esi-8, ke… andiyiyo, siza kuthi, Abangenabanini: IWebhu eMnyama Abaphulaphuli ekujoliswe kubo, kwaye andizukuphinda ndiyibone, nokuba ndifuna ukubona isiphelo sesibini kakubi kangakanani (funda: nokuba umphathi wam undixelele kangakanani).
4. Bala amanqanaba okuphela kwe- Abangenabanini: IWebhu eMnyama kwaye uchaze isigwebo sakho.
Cai: Ukuphelisa u-A ufumana u-D. Oqobo Akudityaniswanga kugqityiwe kukoyikisela ukutsiba obekukho, ngelixa uhlahlo-lwabiwo mali oluhlekisayo, lusanelisa. Ngexesha lokuphela kokujikeleza ngaphakathi Iwebhu emnyama , iindlela zokoyikisa kunye nokulandelelana okungathandabuzekiyo kuyaphinda kusetyenziswe kwakhona. Ukufa kukaDamon kuvakala ngathi yinto onokuyibona kwifilimu yomdlalo weqonga ongoyikisiyo; asikwazi nokubona oko kwenzekayo ku-Amaya; Kwaye iMatias ukubethwa lilori kuye kwafuneka ukuba ibe phakathi kwezona zinto zidanisayo apho ifilimu eyoyikisayo iphelile.
Ukuphelisa B, nangona: B +. Mboleko kwi Abangenabanini: IWebhu eMnyama ukuzama ukwenza ukukhula komlingiswa othile. Kuvakala ukuba umbongo uphelela ekubeni uMatias abulawe ngokwasemzimbeni kwaye ahlutshwe ngengqondo, eyokugqibela njengoko yonke imiyalezo yakhe ebhaliweyo eya ku-Amaya iqhutywa ngokuzenzekelayo kwizicatshulwa zokuxolisa malunga nento kanye ebebeyilwa. Amanqaku ebhonasi okuphela ngokufa okusoyikisayo- ndiyothuswa yingcinga yokuba ndingcwatywa ndiphila.
UEliya-kaYesu: Ewe, izandi zipholile, mfo.
Ukubona njengokuba ndibona isiphelo esifanayo kabini, andinakukwazi ukubala amanqaku, kodwa ndiyakwazi ukulinganisa ukubonwa ye ngokufanayo iphela. Ukujonga kwam okokuqala Ukuphela kuka-A kufumana u-D.
Ndacinga ukuba isangqa siphela silawula yonke into kwaye siyile iMatias kunye nabahlobo bayo into enomdla, ukuba ayisosidenge kwaye ayinakuphikiswa. Nangona kunjalo, mna super wayengekho kulo lonke ibhinqa elisisithulu elingenakuzikhusela lakhangwa kwinto yokugcina izinto. Kwakhona, ngaba ndikhankanyile, kwafuneka ndibukele indoda ixhonywa? Oko kusoloko kuyinto enkulu kum.
Ngokubukwa kwesibini kokuphela kuka-A, ndandisazi ukuba yintoni ezayo, ngoko kwakungekubi kangako. Kodwa ngasizathu sithile ndiye ndagcina amehlo am kwiscreen ngexesha lokutyhilwa kwe-Erica Dunne – trephination, eyongeze uxinzelelo olungeyomfuneko kubomi bam. Ndaye ndacinga ukuba iyahlekisa into yokuba abahlaseli batyhilekileyo basebenzise iMicrosoft Word ngenqaku lokuzibulala likaDamon, endaweni ye-TextEdit okanye i-iPhone Notes. Ndiza kunika iwotshi yesibini C-.
5. Chonga umahluko - zingaphi iindlela iziphelo ze Iwebhu emnyama ziyahluka?
Cai: Kulungile, mandizame ukufumana yonke into:
Ukuphela kuka-A, uMatias utshayiswa lori kwaye yile nto. Ekupheliseni B, yindlela etsalwe ngakumbi: Ungcwatyelwe phantsi komhlaba kungekho thuba lokubaleka.
UDamon uxhonywa ngumngxunya ngapha komnyango wakhe wokuhlambela kuzo zombini iziphelo, kodwa ngoyena ubona i-makeup engalunganga ka-Erica Dunne ku-Ending B endaweni kaMatias.
Kuyanyanzelwa ukuba u-Amaya azokungcungcuthekiswa kwaye mhlawumbi abulawe e-Ending A. Ekupheliseni uB, ubomi bakhe buyasinda njengoko kubonakala ngathi abagembuli babenosizi kwisicelo sikaMatias ngobomi bakhe. Endaweni yokuba ashiye inkumbulo yakhe yokugqibela kaMatias njengenye apho axolisa khona ngokungafundi intetho yezandla. Esinjani ukuba sihle isigqibo!
6. Ukuba Abangenabanini: IWebhu eMnyama unokuba, uyazi, unesiphelo esahlukileyo, ubuya kuthanda ukubona ntoni?
Cai: Kunzima ukucinga ukuba ifilimu ibinokuphela nangayiphi na indlela eyahlukileyo, iyelenqe lobulumko ubuncinci. Kungenzeka ukuba yinto epholileyo ngaphandle kwe-field-twist xa ibonakaliswe ukuba u-Amaya wayeyinxalenye ye-network ye-hacker yegazi. Okanye ukuba wayengekho sisithulu. Kodwa andikwazi ukukhalaza nyani malunga nendlela i-Ending B esonge ngayo.
UEliya-kaYesu: Njengoko benditshilo, eneneni bendicinga ukuba enkulu, esisimumu ityhila ukuba abantu abahlaselayo babelawula yonke into ngalo lonke ixesha kwaye beyila iqela labahlobo lalinomdla. Ndiyacinga, ndinikwe imeko yam kunye nendlela endizame ngayo ukuphila ubomi bam kule minyaka ingama-22 idlulileyo, bekuya kuba mnandi ukubona isiphelo apho wonke umntu ahlala khona kwaye yonke loo nto yayilusuku nje lomdlalo ocacileyo apho yonke into yayilungile Inxalenye yomdlalo omnandi. Uyazi, njengemovie Ubusuku boMdlalo . Ewe. Ndingathanda ukuba Abangenabanini: IWebhu eMnyama Ngaba bemovie Ubusuku boMdlalo .
Umhla womgangatho we-tbh okanye ukupasa
I-dallas keuchel iarhente yasimahla
jimmy yitya imvumi ekhokelayo kwihlabathi
I-Simpsons homer phobia
ityala lasecanada robin williams
UChristina Martinez Umphathi wehagu